Kismaayo oo kalluun u dhoofisa Kenya - BBC News Somali
Kismaayo oo kalluun u dhoofisa Kenya
Ibrahim Aden BBC, Muqdisho
Kalluumaysatada magaalada Kismaayo ayaa markii ugu horeysay billaabay inay dhoofiyaan kalluunka ay ka soo jillaabtaan xeebaha magaalada kaddib markii koox ganacsato ah oo gacan ka helaysa hay'ado samafal ay ka hirgaliyeen meel aan sidaa uga fogeyn xeebta warshad lagu diyaariyo kalluunka ka hor inta aan dibadda loo qaadin.
kalluumaysatada waxay saacado badan ku jiraan badda si ay kalluun badan u soo jilaabtaan.
Marka ay yimaadaan xeebta, waxay billaabaan inay doonta ka dajiyaan kalluunka si ay ugu wareejiyaan warshad yar oo laga hiragaliyay magaalada dabaddana loo dhoofiyo.
"kalluunka awal hore waxan usoo saari jirnay, bada ayaan ka soo saari jirnay waxaan keeni jirnay suuqa, suuqa markaan keenno waxa dhici jirtay marka ay badu saa'id u furanto inaan meelaan ku kaydsano oon dhigno oo kaluunka hayso inaan wayno"
Ganacsatada warshadan yar ayaa sheegaya in si wayn looga soo dhaweeyay suuqyada Mombasa ee kalluunka ay u iibgeeyeen. Cabdiraxman Faarax Guuled oo ka mid ah ganacsatadaasi ayaa waxa uu yiri "Kaah fishing waa meel kalluunka lagu diyaariyo oo aad nadaafaddeeda iyo qaabka loo diyaarinayaba uu u wanaagsan yahay oo dhalinyaro xirfad leh ka shaqaynayaan.
Mombaasa markii aan geynay maba la aaminsanayn sidaas, inaan sidaa wax u diyaarin karno ama u hagaajin karno lama aaminsanayn kan aan anagu diyaarinayna waa kii ugu horeeyay markii aan geynayna horey ayaa laga qaatay iyadoo kuwii kale ay taagan yihiin labo maalmood gudohood ayuu ku dhamaaday kaluunkii intaasoo tan ahaa"
Warshadu waxaa sidoo kale lagu habeeyaa kalluunka la jarjaray ee loo diyaariyay in la dubo ama la kariyo, kaasi oo loo iibgeeyo suuqayada magaalooyinka kale ee Soomaaliya.
Haddii sidan oo kale la kordhiyo warshadaha yar yar ee lagu kaydiyo kalluunka, waxa la rumeysanyahay in inkabadan inta tan ee hadda la dhoofiyay in loo iibgayn lahaa suuqyada gobolka, taasoo dhaqaalaha waxbadan ku soo kordhin lahayd.